5 Qodob Oo ay Iska Shabahaan Labada Naadi ee Atletico Madrid & Leicester City | Shabakada Gabooyaha
5 Qodob Oo ay Iska Shabahaan Labada Naadi ee Atletico Madrid & Leicester City
May 8, 2016 - jawaab
Xilligii mucjisooyinku kubadda cagta wuu ka dhamaaday oo muddo dheer ayaa ugu dambeysay, laakiin waxyaabaha ka dhacaya Kubadda cagta mararka qaar waxay xaqiijinayaan inaan wali xilligii mucjisooyinku ka dhamaan kubadda cagta, waxaana taa daliil cad u ah labada naadi ee Atletico Madrid iyo Leiceter City xilli ciyaareedkan.
Leiceter waa mucjiso dhab ah markaad dhan kasta ka eegto, waxay ku guuleysteen koobkii PL-ka, iyagoo xilli ciyaareedkii hore xilligan oo kale ka ordayay iney hoos u noqdaan, sidaas oo kale Atletico Madrid waxa uu gaaray guulo waaweyn kadib markii uu iska xaadiriyay finalka koobka ugu qaalisan Dunida ee Champions Leage, iyagoo waliba dhulka soo dhigay labadii naadi ee adduunka ugu awoodda badnaa ee Barcelona iyo Bayern Munich.
Hadaba waxaa muuqatay meelo ay iska shabahaan labadan naadi oo mid kastaaba uu horyaalka uu ka ciyaaro arrin mucjiso lagu tilmaamay ka dhigaya.
Hantida iyo lacagaha u soo xarootay
Naadiyada waaweyn waxay bixiyaan hanta farabadan, waxaa soo gala dakhli farabadan, laakiin Atletico Madrid iyo Leicster City midna kuma jiro naadiyada lacagaha faraha badan kharaj gareeya, Laicester City waxaa soo galay 104.4 malyuun oo gini, halka Atletico uu soo galay 142.3 milyan oo gini, markii loo barbar dhigo naadiyada Yurub ugu tunka weyn Atletico Madrid waxay soo galeysaa kaalinta 15aad naadiyada ugu hantida badan, halka Leicester aaney soo galeyn xitaa 20 ka ugu horreya.
Sirtu Guushu waa (1:0)
Maaha oo kaliya inaad ku guuleysato goolal farabadan ciyaar kastana ay awoodaadu sareyso, labadan naadi ayaa ciyaarahooda inta badan ku guuleystay 1:0, iyadoo Leicester City ay guul 1:0 ku gaartay 7 ciyaarood iyadoo arrinkaa kala siman Man United iyo west Bromwich, iyadoo Atletico ay hoggaamineyso dhanka Lagiga natiijada ciyaarta lagu badiyo 1:0, iyadoo guul ku gaartay 10 kulan.
Kubad haysashadu waxay ka mid tahay sababaha guusha lagu gaaro, laakiin labadan garoon ee kala ah King Power iyo Vicente Calderon aan laga aqoon kubad haysashada faraha badan, isku celcelis kubad haysasha Leicester City %42.34, halka Atletico Madrid kubad haysashadeedu ay gaareyso %48.49 xilli ciyaareedka oo dhan.
Taatikada Labada Naadi
Labadan naadi ee Atletico Madrid iyo Leicester City ayaa ku ciyaarayay taktikada 4-4-2, labada naadi marna kumay dhanqmin taagtikada 4-2-3-1 oo inta badan naadiyadu ay isticmaalaan.
Goolasha laga Dhaliyay iyo Difaac Labada Naadi
Atletico ayaa dhalisay 60 gool dhanka horyaalka Spain, halka Laicester City ay dhalisay iyaduna 67 gool, labadan naadi ayaan dhalin goolaal aad u farabadan laakiin waxaa usooro gashay iney shabaqooda ilaashadaan si aan goolala farabadan looga dhalin.
Atletico Madrid ayaa laga dhaliyay 16 gool oo kaliya 36 kulan oo ay ciyaartay, iyadoo 23 kulan shabaqooda ilaashaday, waana kooxa ugu wanaagsan Laliga ee shabaqeeda ilaashatay.
Leicester City ayaa laga dhaliyay 35 gool 37 kulan oo ay ciyaartay waana kooxda sadexaad ee ugu digaaca wanaagsan horyaalka Ingiriiska, waxaan naadigani uu shabaqiisa ilaashaday 15 kulan oo aan wax gool ah laga dhalin isagoo halkaa kaalinta 4aad kaga jira oo 3 kooxood oo kaliya ay ka wanaagsan yihiin.